कठै ! राजमार्ग - Pradesh Today
Homeफिचरकठै ! राजमार्ग
दाङ, २० कार्तिक । दाङ–सल्यान–रूकुमलाई जोड्ने लाइफलाइनका रूपमा रहेको राप्ती राजमार्ग जीर्ण बन्दै गएको छ । दाङको अमिलियादेखि रूकुम मुसिकोटसम्मको एक सय ९० किलो मिटर लाइफलाइन (मुख्य सडक)को रूपमा रहेको राप्ती राजमार्ग नियमित मर्मत सम्भारको अभावमा र निकायले चासो नदिदा जीर्ण भन्दै गएको छ ।
सडकको सुरक्षा र मर्मतमा ध्यान नदिदा राजमार्ग पूर्णरूपमा जीर्ण बन्दै गएको हो । विगत चार वर्षदेखि उक्त सडक मर्मतसमेत गरिएको छैन । सडक जीर्ण हुँदा सवारी दुर्घटनाको समेत जोखिम बढाएको छ । तुलसीपुरदेखि रूकुमसम्मको राजमार्ग पूरै जीर्ण छ ।
अधिकांश सडकमा भएको ओटासिल कालोपत्रे उम्किएको छ । सडकैभरी ठूला–ठूला खाल्डाहरू परेका छन् । सडकका मोडहरू धुलाम्य छन् । नालीहरू पनि जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । क्षति पुगेका संरचना समयमै मर्मत नहुँदा अहिले राप्ती राजमार्गअन्तर्गत अमिलिया–तुलसीपुर–सल्यान–रूकुम सडकखण्डको कन्तविजोग अवस्था छ ।
सडकको अवस्था जीर्ण बन्दै गएपछि सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्दै गएको सवारी चालकहरू बताउँछन् । ‘सडकको अवस्था दिनानुदिन दयनीय बन्दै गएको छ’ निर्माण भएदेखि मर्मतसमेत राम्रोसँग भएको छैन’ सल्यान बागचौरका नवराज घर्ती मगरले भने ‘बाटोकै कारण साना सवारी साधन सास्ती छ ।’ यही अवस्थामा सडक रह्यो भने ‘जतिबेला नि ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ ।
सडकको सुरक्षा र मर्मतमा ध्यान नदिदा राजमार्ग पूर्णरूपमा जीर्ण बन्दै गएको हो । विगत चार वर्षदेखि उक्त सडक मर्मतसमेत गरिएको छैन ।
सडक जीर्ण हुँदै जाँदा दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढिरहेको मगरको भनाइ छ । सडक निर्माण भएदेखि केही स्थानमा टालटुलको कामबाहेक अरू मर्मतको काम नभएको स्थानीय सविन केसीले गुनासो गरे । उनले कच्ची बाटोभन्दा राजमार्ग कुनै फरक नभएको भन्दै जोखिम बढेको बताए । २०७० सालमा सडकखण्ड स्तरोन्नती गर्दै कालोपत्रे गरिएको थियो ।
त्यसको नियमित मर्मत नभएपछि अहिले जीर्ण बन्दै गएको हो । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा विश्व बैंकको ६१ करोड ५० लाख ८७ हजार रूपैयाँमा तुलसीपुर–रूकुम खडकखण्ड ओटासिल गरिएको थियो । कालोपत्रे (ओटासिल) गरिएको सडकखण्ड एक वर्षदेखि नै भत्किन सुरू भए पनि मर्मतमा कसैको चासो देखिएको छैन ।
सडक जीर्ण बन्दै गएपछि उक्त सडकखण्डमा यातायातका साधन गुडाउनसमेत जोखिम भएको यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन् । ब्यवसायी डिल्ली खड्काले सडक जीर्ण हुँदा सवारी साधन गुडाउन सास्ती हुने गरेको बताए । ‘म प्रायः दैनिकजसो गाडी लिएर यो सडकमा यात्रा गर्छु’ उनले भने ‘सडक जीर्ण हुँदा, दुर्घटनाको भयले कहिलै छोड्दैन ?’
सडक डिभिजन कार्यालय दाङले भने सडक मर्मतको काम भइरहेको बताएको छ । डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर लिलाबहादुर भण्डारीले राप्ती राजमार्गको अवस्था नाजुक रहेको र मर्मतको काम सुरू भएको बताए ।
मर्मतको ठेक्कासमेत लागेर केही स्थानमा मर्मत सुरू भएको उनले जानकारी दिए । सडकखण्डको बीचको भागलाई कालोपत्रे गर्ने गरी टेण्डर गरिसकिएको भण्डारीले जानकारी दिए ।
राप्ती लोकमार्ग जीर्ण बन्दै गएपछि उक्त सडकखण्डमा दुर्घटना पनि बढ्दै गएको प्रहरीले बताएको छ । प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार तुलसीपुरदेखि रूकुम खौलासम्मको सडकखण्डमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि अहिलेसम्म २ सय पटकभन्दा बढी सवारी दुर्घटना भइसकेको छ । २०४२ सालतिर राप्ती राजमार्गको तत्कालिन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठले ट्रयाक खोलेका थिए ।